Izindaba - Indlela yokuvimbela ukugqwala yezingxenye zensimbi ezisuselwa ku-powder
I-Fe-based powder metallurgy uhlobo lwenqubo yokwenza insimbi esebenza kahle, okonga okokusebenza, ukonga amandla, akukho ukungcola futhi efanelekile ekukhiqizweni ngobuningi.Ngenxa yokuthi izinsimbi zensimbi ezisuselwa kuzinsimbi ziyimpuphu yensimbi njengezinto zokusetshenziswa, ngokwakhiwa kokucindezela, sintering, machining, ukwelashwa ukushisa nezinye izinqubo, ngakho-ke imikhiqizo yensimbi yensimbi kufanele ibe nenani elithile lezimbobo ...
I-iron - based powder metallurgy, i-Ningbo powder yokusansimbi
I-Fe-based powder metallurgy iwuhlobo lwenqubo yokwenza insimbi esebenza kahle, okonga okokusebenza, okonga amandla, akukho ukungcola futhi efanelekile ekukhiqizweni ngobuningi.Ngenxa yokuthi izinsimbi zensimbi ezisuselwa kuzinsimbi zensimbi ziyimpuphu yensimbi njengezinto ezingavuthiwe, ngokucindezela ukwakha, ukucwilisa, imishini, ukwelashwa kokushisa nezinye izinqubo bese iba, ngakho-ke imikhiqizo yensimbi ye-metallurgy kufanele ibe nenani elithile lama-pores, ngokuvamile iqukethe ama-pores ayi-10% -30% Uma kuqhathaniswa nezinto zensimbi, ithambekele ekugqwaliseni. singakwenza ukukhiqiza ukugqwala? uvimbela kanjani ukugqwala? Okulandelayo, abakhiqizi be-Ningbo powder yokusansimbi kuzingxenye ze-gearbox zensimbi - ezisekelwe ku-powder metallurgy izingxenye - i-synchronizer tooth hub njengesibonelo, ukuze uphendule izinsimbi ezisuselwa ku-powder metallurgy izingxenye zokugqwala zokuvimbela.
Indlela Yokuvimbela Ukugqwala Yokukhiqizwa Kwehabhu Lama-Synchronizer Tooth Kususelwa Ezingxenyeni Zensimbi Yensimbi Yensimbi:
1, ukuvimbela ukugqwala kwensimbi yensimbi: ngoba ukuthengwa kwensimbi yempuphu kuyinto eqinile eyi-powdery, kuzoba khona izimbotshana eziningi phakathi kwempuphu yensimbi, njengasemoyeni omanzi, ngesikhathi esifushane kakhulu kuzogqwala nokugaya, okuholele ekutheni ukusetshenziswa.Ngakho-ke, ukuthengwa kwensimbi yempuphu kufakwe kuplastiki ojiyile ovaliwe, ngasikhathi sinye okwangaphakathi kufanele kungezwe nge-desiccant, yangaphandle enezikhwama zesikhwama ezilukiwe ezijiyile, ukuphakamisa okulula.
2. Isitoreji se-Iron powder: lapho i-iron powder igcinwa endlini yokugcina impahla, kufanele ibe se-in-in yokuqala, i-oda lokuqala.I-powder yensimbi ekuxubeni, ngokusho kokuthengwa kwepakethe, ipakishwe esikhwameni sepulasitiki esinyene ngokuphelele ivaliwe, ukuvimbela i-oxidation yempuphu yensimbi exubile; Kubekwe kuma-pallet okhuni, isikhathi esiphakathi kokusetshenziswa kuvame ukulawulwa zingakapheli izinsuku ezintathu.
I-3, ukusetshenziswa kwenqubo yokucindezela i-iron powder: kwinqubo yokukhiqiza ngokucindezela ihabhu lezinyo le-synchronizer, i-powder yensimbi exubile kufanele isetshenziswe ngokuhola. Akuvumelekile ukukhipha yonke impuphu yensimbi ngasikhathi sinye ngenxa yemisebenzi eminingi. Inani lokushintsha ngakunye liyasetshenziswa futhi lamukelwe, futhi nenani lempuphu yensimbi exubile phakathi kwezinqubo kufanele ilawulwe ngokuqinile.
4. Ihabhu le-Synchronizer licindezela isitoreji esingenalutho: I-synchronizer izinyo ihabhu icindezela kungenalutho, amandla aphansi, kulula ukulimaza, kufanele iphathwe ngobumnene, ibekwe kuthileyi wepulasitiki wemoto engenayo.I-stintered futhi icindezelwe kungenalutho kungakapheli amahora angama-48, ayikwazi ukwandisa inani Ukuvikelwa kwangaphandle kwamaphakethe, ngaphezu kwesikhathi, nefilimu yepulasitiki izobe isizungeza ukumisa imoto, ukufaka uphawu, ukugwema umoya omanzi ungene.
I-5, ihabhu lamazinyo elikhanyisiwe lisebenzisa i-billet, lisebenzisa izindlela ezintathu zokuhlola zokulwa nokugqwala: ngemuva kokugcotshwa, ungathathi ukusetshenziswa okungahambisani nokugqwala, uqedele i-powder metallurgy tooth hub nge-30 # oyili; Ngemuva kokugcoba, gxuma ngokushesha ku-F901 uwoyela wokulwa nokugqwala , ukuqedela i-powder metallurgy tooth hub ngamafutha angama-30 #; Inhlanganisela evuthayo, okungukuthi cwilisa ku-WD40 uwoyela wokulwa nokugqwala, uqeda i-powder metallurgy tooth hub ene-30 # oyili.
Indlela engenhla yokuvikela ukugqwala kwezingxenye zensimbi ezisuselwa ku-metallurgy izingxenye yethulwa lapha. Ukuthola isilinganiso esilula futhi esisebenzayo sokuvimbela ukugqwala kwezingxenye zensimbi ezisuselwa ku-powder, ukuze kuthi lapho kwenziwa inqubo yokukhiqiza, kwehliswe izindleko zokuvikela ukugqwala futhi kuthuthukise ukusebenza kahle kokukhiqiza.